480V LED Industrial Power Supply Light China Manufacturer
Home > Products > 200-480Vac High Voltage Input LED Treiber > Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber > 480V LED Industrial Power Supply Light
Fahold LED Lig mpandefa dia fomba azo antoka hampiasa hery any ivelany. Na mila fahazavana hanatsarana ny fahitana na hanatsara ny filaminana isika, ny jiro mpamily antsika dia ny vahaolana ara-toekarena indrindra amin'ny fahazoana lalana, fiara, lalana, lalan-kely, takela-kazo, marika, fefy na sarintany.
Ireo vahaolana momba ny tontolo iainana mifamatotra amin'ny tontolo iainana dia mampihena ny vidiny amin'ny alàlan'ny fampihenana ny saram-pandraharahana mifandraika amin'ny fanoloana lamosina mahazatra ary mitohy ny saram-piantohana tsy ilaina. Tena mampihena na manafoana ny faktioran-dry zareo manontolo. Tsy misy fandaniam-bola be loatra, fandaniana fitrandrahana, na saram-pamokarana mahery vaika ataon'ny elektrôna satria ireto rafitra ireto dia mety ho ambany noho ny vidin'ny sisin-tany mahazatra nentim-paharazana. Ny fitaovan'ny herinaratra dia efa mialoha ny fametahana azy ka ny hany fantsona hafa ilaina ihany koa dia mamoy ny taribidina ao anatin'ilay tariby matevina. Fitaovana elektrônika mitondra herinaratra
Mpiasa mitondra herinaratra tsy mandeha tsara, Mpihazakazaka efa ela, mpitaingina 48V